Zavatra vola | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Zavatra vola RSS
The soedoa Sandam-bola
The soedoa vola(krona) no ny vola madinika Soeda satria 1873. Izany no navoakan'ny soedoa banky-pirenena, Sveriges Riksbank. Amin'ny teny anglisy, ny vola madinika dia Mahalana no Nasiana firesahana tsy mivantana toy ny satro-boninahitra soedoa (Krona satro-boninahitra dia midika in soedoa). Krona iray dia nizara ho 100 ariary. Na izany aza, vola madinika rehetra dia naato akora toy ny Septambra 30, 2010. Products Mbola tombanana amin'ny akora, Na izany aza, rehefa handoa-bola aggregates rehetra dia nanitsy ny akaiky indrindra Krona. Vola madinika amin'izao fotoana izao dia azo ampiasaina 1 krona, ary 5 ary 10 satroboninahitra. Banknotes dia amin'ny sokajy ny 20, 50, 100, ary 500 satroboninahitra.
Soeda dia vita ny fomba fiaina mahasoa, noho ny sisin'ny nanapaka orinasa tsy miankina, malalaka tombony ara-tsosialy, mandroso fampielezana rafitra, ary ny lalina asa manan-talenta fahefana. Ny toe-karena dia mafy toerana ho any ivelany fifanakalozana, fampiasana ny pananana pototry ny hazo, hydro fahefana, ary vy mineraly. Ny ara-bola maneran-tany vonjy taitra ny 2008 nihena saran-dalana sy ny fampiasana mahaliana, nitondra ny momba ny toe-karena soedoà mba solafaka an fisintahana na dia teo aza ny vola sy ny fototra mafy tena ilaina. Mafy orina fantany po nanampy ho mafy orina Aza kivy amin'ny taona 2010 ny 2011.
Ny Zavatra vola dia aseho amin'ny 1873, supplanting ny Riksdalersgatan. Ny vola dia natolotra ho aftereffect ny skandinavianina ny volan'ny tafaray amin'i Norvezy sy Danemark, izay nandeha foana ny Ady Lehibe I. Vola teny ambanin'ny hoe mpiady varotra tsy teo ambanin'ny haavon'ny kalitao tsara indrindra. Ny volan'ny Union vita tamin'ny hipoaka ny fahatezeranao-up ny Ady Lehibe I tamin'ny 1914. Soeda Nitolo-batana ny faran'izay tsara haavon'ny Aogositra 2, 1914, ary tsy misy hiova, swapping ambaratonga ny sendika tonga tao tapitra.
By hoe mpiady varotra tsy, Soeda dia takiana mba hanatevin-daharana ny eurozone sy ny proselyta ny fampiasana ny Euro. Aoka izany na tsy izany, ny ankamaroan'ny Swedes manohitra ny fandraisana ny coin.On Septambra 14, 2003, enina amby dimam-polo isan-jaton'ny mpifidy izay miala avy nandà ny fandraisana ny Euro. Fanararaotana ny afaka fepetra, ny governemanta ny Soeda dia naka tsy hiaraka ERM II, dia heverina ho mialohan ny fandraisana ny Euro.